သင်သည် ကြိုတင်ငွေပေးချေသည့်လိုင်းကို ရယူလိုပါက၊ Suop သည် သင့်အား အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်ရန် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Suop မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းသည့်အခါ ငွေစုပြီး ဤကုမ္ပဏီမှ ကမ်းလှမ်းထားသော ပရိုမိုးရှင်းများကို ခံစားလိုက်ပါ။.
Suop မိုဘိုင်းအား ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းသည် ယခုအခါ ပိုမိုလွယ်ကူလာပါပြီ၊ ဤကြိုတင်ငွေဖြည့်လိုင်းသည် သင့်စိတ်ကြိုက်အားပြန်သွင်းရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Suop ဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းသို့ ငွေကို လုံခြုံချောမွေ့စွာ ထည့်ပြီး သင်အမြဲဆက်သွယ်နေပါမည်။
Suop မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို စတိုးဆိုင်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ la Caixa ATM စက်များနှင့် Suop ဝဘ်ဆိုဒ်မှ အွန်လိုင်းမှ အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်သော မတူညီသော အားပြန်သွင်းနည်းလမ်းများကို ရှင်းပြပါမည်။ မင်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးပါ။
စတိုးဆိုင်များနှင့် အဆောက်အဦများတွင် အားပြန်သွင်းပါ။
စတိုးဆိုင်များနှင့် တည်ထောင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုပါ။ "disashop" လိုဂိုဖြင့် Suop မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။ သင်၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွင် အားပြန်သွင်းရန် အချက်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိသည်- ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ စာတိုက်များနှင့် စတိုးဆိုင်များသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့နေပါသည်။
၎င်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင်၏အားသွင်းအချက်ကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ အားပြန်သွင်းမြေပုံသင့်တည်နေရာနှင့် အနီးစပ်ဆုံး အဆောက်အဦများကို သင်မြင်နိုင်သည် ။ ထို့အပြင်၊ သင့်တွင် နံပါတ် 981 055 210 ကိုခေါ်ဆိုရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသည်၊ ထိုနေရာတွင် ၎င်းတို့သည် သင့်အား အားဖြည့်စတိုးဆိုင်များနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
La Caixa ATM စက်များမှ ငွေဖြည့်သွင်းပါ။
သင့်အနီးအနားတွင် Caixa ATM ရှိပါက၊ သင်သည် Suop မိုဘိုင်းလ်ကို အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်အားပြန်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်ဘဏ်ကတ်များ၊ ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်များကို မလိုအပ်ဘဲ Caixa Bank ၏ သုံးစွဲသူဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ရရှိနိုင်သော ယူရို 30 ကို သိမ်းဆည်းထားပါ၊ ဤသည် Caixa ဖြင့် အားပြန်သွင်းရန် အနည်းဆုံး ပမာဏဖြစ်သည်။.
သင့်မိုဘိုင်းအား ATM စက်များမှ ပြန်လည်အားပြန်သွင်းရန်အတွက် Suop စစ်ဆေးခြင်းအကောင့်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ၏ အလှူငွေထည့်ဝင်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ အာရုံစိုက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ la Caixa ATM များမှတစ်ဆင့် ငွေပြန်သွင်းခြင်းသည် ချက်ချင်းမဟုတ်ပါ၊ နာရီများ သို့မဟုတ် ရက်များ ကြန့်ကြာနိုင်ပါသည်။.
La Caixa ATM စက်များမှ ဤအဆင့် ၆ ဆင့်အတိုင်း အားပြန်သွင်းပါ။
1.- "အပ်ငွေ" ကို ရွေးပါ
2.- "IBAN ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်" ကိုရွေးချယ်ပါ။
3.- "စာအိတ်မပါသော ငွေစက္ကူများ" ဟူသော နေရာတွင် ရိုက်ထည့်ပါ။
4.- အားပြန်သွင်းရန် ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ။
5.- IBAN ကုဒ်တောင်းသောအခါ ES65 2100 2132 4602 0043 0487 ကိုခေါ်ဆိုပါ။
6.- နောက်ဆုံးတွင် Suop မိုဘိုင်းနံပါတ်ကိုညွှန်ပြပါ။
Suop အွန်လိုင်း မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။
စာမကျြနှာကိုရိုက်ထည့် ဝဘ် Suop မှ သင့်အိမ် သို့မဟုတ် ရုံး၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှ အားပြန်သွင်းပါ၊ သင်၏ laptop သို့မဟုတ် desktop PC ကို အသုံးပြုပါ။ PayPal မှတဆင့် သင့်မိုဘိုင်းလိုင်းသို့ လက်ကျန်ငွေကို ပေးချေနိုင်ပြီး သင်၏ ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Suop မိုဘိုင်းကို ပြန်လည်အားပြန်သွင်းရန် သင်၏ PayPal အကောင့်၏ လက်ကျန်ငွေကို အသုံးပြုပါ။My Suop ၊ အထူးသ ဖြင့် သင်၏ဝင်ပါ။ client ဧရိယာ. ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ အမြန်စာရင်းသွင်းပါSuop နဲ့ပူးပေါင်းပါ။
သင့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို ဖန်တီးပါ။ ၎င်းအတွက် သင့်တွင် မှန်ကန်သောအီးမေးလ်တစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပြီး အသုံးပြုမှုအခြေအနေများကို လက်ခံပြီး ကလစ်နှိပ်ပါ။ "မှတ်ပုံတင်ရန်".
သင်၏ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်များဖြင့် Suop မိုဘိုင်းအား ပြန်လည်အားဖြည့်ရန်အတွက် PayPal ဖြင့် ငွေပြန်သွင်းရာတွင် ဖော်ပြထားသည့် တူညီသောအဆင့်များကို လိုက်နာပါ၊ သင့်တွင် အမြန်စာရင်းသွင်းပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဧရိယာ နှင့် သင်သည် My Suop သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ သင်ပေးချေလိုသောပမာဏကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်၊ ၎င်းသည် €5မှ € 30 အထိဖြစ်သည်။ ကတ်များဖြင့် အားပြန်သွင်းခြင်းသည် သင့်လိုင်းကို အလိုအလျောက် အားပြန်သွင်းခြင်း၏ အားသာချက်ကို ပေးပါသည်။ My Suop မှတစ်ဆင့်၊ သင်သည် သင့်အား ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် သင်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာမှ ရွှေ့စရာမလိုဘဲ အခြားအရာများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
သင်၏ကြိုတင်ငွေပေးစနစ်ဖြင့် သင်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လျှော့စျေးများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများကို ခံစားရင်း Suop မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ရက်ပေါင်း 30 ကြာ အခမဲ့ အပိုဆုများ ရယူပါ။ အားပြန်သွင်းသည့်အချိန်မှစ၍
သွားလာရန် ဘောနပ်စ်များနှင့် လက်ဆောင်လက်ဆောင်များကို စတင်ခံစားရန် €10 မှ ငွေဖြည့်ပါ။ Suop မှ သင့်အား ပေးဆောင်သော ပရိုမိုးရှင်းများကို သင် ဂရုပြုရပါမည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ပြီး ဤကြိုတင်ငွေပေးလိုင်းက သင့်အတွက်ရှိသောအရာအားလုံးကို ရှာဖွေပါ။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » နိုင်ငံခြား » Suop မိုဘိုင်းကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အားပြန်သွင်းပါ။